Mogadishu Journal » Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Africa
Mjournal :- Waxaa sii kordhaya dilalka iyo beegsiga kale ee lagu hayo Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, waxaana maalmihii la soo dhaafay tiro Soomaali ah siyaabo kala duwan loogu dilay magaalooyin kuyaala dalkaasi.
Dilkii ugu dambeeyay ayaa xalay magaalada Cape Town gaar ahaan deegaanka lagu magacabao Easterville loogu geestay muwaadin Soomaaliyeed, waxaana la sheegay in ay baxsadeen kooxihii burcada ahaa ee dilkaasi fuliyay.
Marxuunka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Mustaf Nuur Axmed , waxaana marxuunkan la dilay uu wade ka ahaa gaari nuuca xamuulka qaada ah, waxa uuna marxuunka kamid noqday dadk sida xaqdarada ah loogu dilay dalka Koonfur Afrika.
Isbuucii la soo dhaafay ayaa siyaabo kala duwan dalka Koonfur Afrika loogu dilay labo nin oo Soomaali ah kuwaa oo lagu weeraray xarumo ganacsi ay dalkaasi ku lahaayeen, waxaana dilalka sii kordhaya cabsi badan ka muujiyay muwaadiinta Soomaaliyeed ee kunool Koonfur Afrika.
Dowladda oo beenisay warar ay ku sheegtay been abuur oo laga faafiyay